MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardနိုဝင်ဘာ 2019 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: နိုဝင်ဘာ 2019
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်)
– မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး
နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြု နေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များ ဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြောက်ဒဂုံအိတ်ချိန်း နှင့် အရှေ့ဒဂုံအိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ
နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ
ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့
၀၁ – ၈၀၁၀xxx
၀၁ – ၈၀၁၁xxx
၀၁ – ၂၅၈၅xxx
၀၁ – ၃၅၈၅xxx
အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသော အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်ကွန်ရက်စနစ် (Cable Network) အားလည်း ယခုလက်ရှိ ကြေးနန်းကြိုး (Copper Cable) အသုံးပြုစနစ်မှ မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုစနစ်သုံး VoIP တယ်လီဖုန်းများဖြင့်
ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေမှစ၍ (၃) လ အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 29, 2019 နိုဝင်ဘာ 29, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
၂၀၁၉ ခုနှစ် MPT တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ နိုင်ငံအဆင့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မှ မျိုးဆက်သစ်လူငယ် ဘောလုံးအားကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်) – ၂၀၁၉ ခုနှစ် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် MPT တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစဉ်များကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့၊ မန္တလာသီရိ အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားပွဲစဉ်တွင် အထက်မြန်မာပြည် (က) အသင်း နှင့် အမျိုးသမီးပွဲစဉ်တွင် အောက်မြန်မာပြည် (က) အသင်းတို့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံအဆင့် ချန်ပီယံအသင်းများအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြပါသည်။
ယခုနှစ် အတွက် MPT တက္ကသိုလ်များဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ ဇုန်အလိုက် ပွဲစဉ်များကို အောက်တိုဘာလ (၁၁) ရက်မှ စတင်ကာ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အောက်မြန်မာပြည် ဇုန်များ၏ ပွဲစဉ်များကို ရန်ကုန်မြို့၌ ပဒုမ္မာအားကစားကွင်းနှင့် တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးကွင်း၊ အထက်မြန်မာပြည် ဇုန်များ၏ ပွဲစဉ်များကို မန္တလေးမြို့ မန္တလာသီရိ အားကစားကွင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဘောလုံးကွင်းတို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲ အဆင့်ဆင့်တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် အထက်မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘောလုံးချန်ပီယံ အသင်း (၂) နှင့် အောက်မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘောလုံး (၂) သင်းစီတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကာ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလာသီရိ အားကစားကွင်းတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ စတင်၍ နိုင်ငံအဆင့် ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အနိုင်ရရှိသည့် အသင်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း (၆၀) ကျော် တန်ဖိုးရှိ ဆုကြေးများနှင့် ဆုအမျိုးအစားပေါင်း ၂၀ ကျော်ကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အနိုင်ရရှိသည့် အသင်းများမှ ဘောလုံးအားကစားသမားများအနေဖြင့် ၂ နှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ကျင်းပသည့် အာဆီယံတက္ကသိုလ်များ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုပြိုင်ပွဲသည် မြန်မာ့မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ဘောလုံးကစားသမားများ၏ စွမ်းရည် ပိုမိုတိုးတက် လာစေရေးနှင့် လူငယ်များအကြား ကျန်းမာကြံခိုင်သည့် လူနေမှုဘဝကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် MPT နှင့် MNL တို့ ပူးပေါင်းကာဆောင်ရွက်သည့် သုံးနှစ်တာ အစီအစဥ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဘောလုံးအားကစားသည် နိုင်ငံတကာတွင် လူအများတစ်ခဲနက် အားပေးသဘောကျသည့် အားကစားတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အလျောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လူအများစိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံး အားကစားဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဘောလုံးလောက ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရှိရေးအတွက်လည်း ပြည်သူအများက မျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာလူငယ်များအတွက် အားကစားနှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အားသွန်ခွန်စိုက် အထောက်အပံ့ပေးနေသည့် ပြည်တွင်းအော်ပရေတာတစ်ခုအနေနှင့် MPT သည် မြန်မာဘောလုံးအားကစားလောက ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေရေးအတွက် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် (MNL) ၊ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(MFF) တို့နှင့်ပူးပေါင်းကာ လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်များ၊ အသက် ၁၄ နှစ်အောက် (U-14) ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ နှင့် MPT- တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အစရှိသည့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ကျင်းပပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် MPT အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်စေရေးအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့် ကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာစေရေးကိုရည်ရွယ်ပြီး လိဂ်ပြိုင်ပွဲများကို ဆောင်ရွက်နေသည့် MNL ကိုလည်း လိုအပ်သည့် အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။
MPT က နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ လူငယ်များအကြား အခြေခံဘောလုံးကစားခြင်း စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး အခြေခံ ဘောလုံးကစားနည်းစွမ်းရည်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ရုပ်သံကို ကျွမ်းကျင်ဘောလုံးနည်းပြများ နှင့် အမျိုးသားဘောလုံး အကယ်ဒမီမှ လူငယ်ဘောလုံး ကစားသမားများဖြင့် ရိုက်ကူးစီစဉ်ခဲ့ကာ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို ဒေတာခ ကျသင့်ခြင်း မရှိဘဲ MPT ၏ လိုတရ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် ဖြစ်သော https://lotaya.mpt.com.mm/service/mnl/training_video တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် လွှင့်တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
MPT ၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ သော် လည်းကောင်း၊ MPT ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ ဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage/ နှင့် MPT ၏ တရားဝင် website ဖြစ်သည့် https://mpt.com.mm တို့တွင် ဝင်ရောက်၍ လည်းကောင်း ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားအသင်း(အထက်မြန်မာပြည် (က) အသင်း ) ချန်ပီယံ
အမျိုးသမီးအသင်း (အောက်မြန်မာပြည် (က) အသင်း) ချန်ပီယံ
အမျိုးသားအသင်း (အောက်မြန်မာပြည် (က) အသင်း) ဒုတိယ
အမျိုးသမီးအသင်း (အထက်မြန်မာပြည် (က) အသင်း) ဒုတိယ
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 28, 2019 နိုဝင်ဘာ 29, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Sojitz Corporation တို့သည် JICA ODA Loan ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် အဆင့်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်းအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ၁၀:၀၀ နာရီ၌ နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးကျော်မျိုးနှင့် ဦးသာဦး ၊ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဌာနအကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန် သံအမတ်ကြီး Mr. Ichiro Maruyama ၊ JICA Myanmar Office မှ Chief Representative Mr. Masayuki Karasawa ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနများမှ ဌာနအကြီးအကဲများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အကြံပေးကုမ္ပဏီ JTEC-JV နှင့် Sojitz Corporation တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ကြပါသည်။
အစီအစဉ်အရ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသာဦးက အဖွင့်အမှာစကားကို လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး Mr. Ichiro Maruyama က ဝမ်းမြောက်စကားကို လည်းကောင်း၊ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ထွန်းက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ Sojitz Corporation Managing Executive Officer Mr. Koichi Yamaguchi က စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက် ၍ လည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ နှစ်ဘက်သဘောတူစာချုပ်ကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ထွန်း၊ Sojitz Corporation Managing Executive Officer Mr. Koichi Yamaguchi တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးကာ စာချုပ်ကို အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြပြီး စုပေါင်း မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါသည်။
အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်း အတွက် Project Feasibility Study ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ဂျပန်ယန်းငွေ (၁၀.၅) ဘီလီယံ ပမာဏရှိ ချေးငွေစာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ (JICA) တို့အကြား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာတင်ဒါခေါ်ယူ၍ တင်သွင်းလာသော ကုမ္ပဏီများအား အဆင့်ဆင့် စိစစ်ပြီးနောက် Sojitz Corporation ကို အပြီးသတ် ရွေးချယ်ကာ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းအရ ရန်ကုန်မြို့တွင်းအပါအဝင် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးမြို့ များကို ဆက်သွယ်ထားသော ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ၊ National Gateway နှင့် ISP များ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကာလမှာ စုစုပေါင်း (၂)နှစ် ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 20, 2019 နိုဝင်ဘာ 22, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
၂၀၁၉ ခုနှစ် MPT တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဗိုလ်လုပွဲစဉ်များ စတင်ကျင်းပ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်) – ၂၀၁၉ ခုနှစ် MPT တက္ကသိုလ်များဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဗိုလ်လုပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့ မန္တလာသီရိ အားကစားကွင်း ၌ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်တွင် စတင်ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်မှ ရွေးချယ်ခံ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘောလုံးချန်ပီယံ အသင်း ၂ သင်းစီ နှင့် အောက်မြန်မာပြည်မှ ရွေးချယ်ခံ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘောလုံးချန်ပီယံ အသင်း ၂ သင်းစီ တို့က ယခုရက်သတ္တပတ်မှ စတင်ကာ ဗိုလ်လုပွဲအတွက် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြတော့မည် ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲ၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အကောင်းဆုံးဗိုလ်လုပွဲစဉ် ကိုလည်း နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့ မန္တလာသီရိ အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။
MPT အနေဖြင့် ဘောလုံးအားကစား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် အခြေခံအဆင့်မှ စတင်ပြီး ကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်နှင့်အညီ ယခုကဲ့သို့ MFF ၊ MNL နှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းစီစဉ် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ် ပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် အနာဂတ်၏ ဘောလုံးအားကစား ကြယ်ပွင့်များ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ခြေစွမ်းခြေစများကို ထုတ်ဖော်ပြသပြီး ယှဉ်ပြိုင်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သကဲ့သို့ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်မှု၊ တက်ကြွကျန်းမာသည့် လူနေမှုပုံစံနှင့် အသင်းအဖွဲ့လိုက် စုစည်းပူးပေါင်းမှုစိတ်ဓါတ်၊ အားကစားစိတ်ဓါတ် စသည့် အခြေခံကောင်းများလည်း ရရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲသည် မြန်မာ့ဘောလုံးအားကစားလောကအတွက် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကစားသမားများ မွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန် MPT နှင့် MNL တို့ သုံးနှစ်တာရည်ရွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်သည့်အပြင် လူငယ်ကစားသမားများ ဘောလုံးစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရေးအတွက် လူငယ်ခြေစွမ်းပြ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဘောလုံးသင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် ဘောလုံးအားကစားအတွက် လိုအပ်သည့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် MPT ၏ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်မှုများအနက်မှ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် MPT- တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်က စတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အောက်မြန်မာပြည်ပွဲစဉ်များကို ရန်ကုန်မြို့၌ ပဒုမ္မာအားကစားကွင်းနှင့် တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးကွင်း၊ အထက်မြန်မာပြည်ပွဲစဉ်များကို မန္တလေးမြို့ မန္တလာသီရိ အားကစားကွင်းနှင့် တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးကွင်းတို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် MPTမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသည် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် ကစားသမားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်နှင့် အောက်မြန်မာပြည်အတွက် ပွဲစဉ်များပြီးဆုံးချိန်တွင် ဒေသအလိုက် ချန်ပီယံအသင်းများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင်ထိပ်ဆုံးအသင်းများ တွေ့ဆုံယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ယခုပြိုင်ပွဲမှာ ၂ နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသည့် အာဆီယံတက္ကသိုလ်များ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကစားနိုင်မည့် အရည်အချင်းရှိသော ကစားသမားများ ထွက်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် MPT တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဗိုလ်လုပွဲ ပွဲစဉ်များကို အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် MPT- တက္ကသိုလ်များဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
နိုင်ငံအဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ (အမျိုးသား)
အောက်မြန်မာပြည်ဇုန် (က) အသင်း
အထက်မြန်မာပြည်ဇုန် (ခ) အသင်း
အထက်မြန်မာပြည်ဇုန် (က) အသင်း
အောက်မြန်မာပြည်ဇုန် (ခ) အသင်း
အုပ်စု (က) ပထမ
အုပ်စု (ခ) ဒုတိယ
နိုင်ငံအဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ (အမျိုးသမီး)
(ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့သည့် မန္တလေးဇုန် အမျိုးသား အသင်း)
(Runner Up ဆု ရရှိခဲ့သည့် မုံရွာဇုန် အမျိုးသားအသင်း)
(ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့သည့် မြစ်ကြီးနားဇုန် အမျိုးသမီး အသင်း)
(ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့သည့် ဒဂုံဇုန်အမျိုးသမီးအသင်း)
(Runner Up ဆု ရရှိခဲ့သည့် မုံရွာဇုန် အမျိုးသမီးအသင်း)
(ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့သည့် ပုသိမ်ဇုန်
(Runner Up ဆု ရရှိခဲ့သည့် မော်လမြိုင်ဇုန် အမျိုးသားအသင်း)
(Runner Up ဆု ရရှိခဲ့သည့် မော်လမြိုင်ဇုန်အမျိုးသမီးအသင်း)
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 19, 2019 နိုဝင်ဘာ 22, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
CANAL+ နှင့် MPT တို့မှ အခပေး အထူးရုပ်သံလိုင်း ၉ လိုင်း နှင့် အခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်း ၂ လိုင်းအား မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများပေါ်တွင် လွယ်ကူစွာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် “အမိုက်စား အစီအစဉ်” တစ်ရပ်အား ပူးပေါင်းတင်ဆက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့) – မြန်မာနိုင်ငံ၏အခပေးရုပ်သံလိုင်း စီစဉ်တင်ဆက်သူ ဖြစ်သည့် CANAL+နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး နှင့် ထိပ်တန်းမှဦးဆောင်လျက်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် MPT တို့သည် MPT ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူများ အားလုံးအတွက် အခပေး အထူးရုပ်သံလိုင်း ၉ လိုင်းနှင့် အခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်း ၂ လိုင်း တို့အား myCANAL Myanmar မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းမှ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့်ရမည့် “အမိုက်စား အစီအစဉ်” တစ်ရပ်ကို တရားဝင် ပူးပေါင်း တင်ဆက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT အသုံးပြုသူများ သည် အမျိုးအစားစုံလင်သော CANAL+ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ လက်ဝှေ့ နှင့် အားကစားအစီအစဉ် ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ မြန်မာပရိသတ်အကြိုက် ရုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းများ၊ နာမည်ကြီးအဆိုတော်များ၏ တေးသီချင်းဗွီဒီယိုများ၊ ပညာပေး ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များကို မြန်မာပရိသတ်အတွက် ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့် မြန်မာစာတန်းထိုး၊ မြန်မာနောက်ခံစကားပြောတို့ဖြင် တင်ဆက်ပေးနေသော အခပေး ရုပ်သံလိုင်း ၉ လိုင်း နှင့် အခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်း ၂ လိုင်းကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်အစီအစဉ်အား တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်သည့် အနေနှင့် တစ်ပတ်လျှင် အထူးစျေးနှုန်း ၈၀၀ ကျပ်တည်းဖြင့် ခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီဂျစ်တယ် မိုဘိုင်းလ်ဖျော်ဖြေရေး အက်ပလီကေးရှင်း myCANAL Myanmar မှ တစ်ဆင့် MPT အသုံးပြုသူများ နှင့် မြန်မာရုပ်ရှင်ချစ်သူများသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းများ နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများအား ၄င်းတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ myCANAL Myanmar မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်မည့် အထူးရုပ်သံလိုင်းများမှာ CANAL+ ZAT LENN (ဇာတ်လမ်း)၊ CANAL+ SPORTS (အားကစား)၊ CANAL+ ACTION (အက်ရှင်)၊ CANAL+ MAE MADI (မယ်မဒီ)၊ CANAL+ SU SANN (စူးစမ်း)၊ CANAL+ GITA (ဂီတ)၊ CANAL+ HA HA (ဟဟ)၊ CANAL+ CHATATE (ချာတိတ်)၊ CANAL+ PUPTUTUE (ပူတူတူး) တို့ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းများဖြစ်သည့် MRTV-4 နှင့် Channel7တို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။
MPT အသုံးပြုသူများသည် အားကစားအစီအစဉ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တီဗီအစီအစဉ်များ နှင့် ရုံတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကို အထူးစျေးနှုန်း တစ်ပတ်လျှင် ၈၀၀ ကျပ်ဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ထိ စိတ်ကြိုက်ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင်မူ ပုံမှန်စျေးနှုန်း တစ်ပတ်လျှင် ၉၉၉ ကျပ်ဖြင့် ဆက်လက် ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ MPT အနေနဲ့ မြန်မာပရိသတ်အကြိုက် မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်သူတွေ၊ ဆန်းသစ်တဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို တီထွင်သူတွေနဲ့ လက်တွဲ ပူးပေါင်းမှုတွေ ကို ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နဲ့ အမျိုးအစား အများအပြား လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ စားသုံးသူတွေရဲ့ ဒီဂျစ်တယ် လူနေမှုပုံစံများကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ CANAL+ နဲ့ ယခုလို လက်တွဲ ပူးပေါင်း လိုက်တဲ့အတွက်အဆင့်မြင့် ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တွေကို အလွန်သက်သာ တဲ့စျေးနှုန်းတွေ နဲ့ လွယ်ကူစွာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို ကမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ CANAL+ အနေနဲ့လည်း မြန်မာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက်ကိုသိရှိပြီး အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပိုမို တိုးမြှင့်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု MPT – KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“CANAL+ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမှဦးဆောင်လျက်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်တဲ့ MPT နဲ့ အခုလို ပထမဦးဆုံး အကြိမ် လက်တွဲပူးပေါင်းခွင့်ရတဲ့ အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက သုံးစွဲသူတွေအတွက် MPT နဲ့ myCANAL Myanmar မိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းက တစ်ဆင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးတီဗီအစီအစဉ်တွေ ကိုကြည့်ရှုနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို သာမကပဲ နောက်ထပ် နောက်ထပ် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုလည်း အစဉ်အမြဲ တီထွင်ကြံဆပြီးပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ CANAL+ ရုပ်သံလိုုင်းတွေ မှာ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းများကို မလွဲမသွေ နှစ်သက်ကြမှာ သေချာပါတယ်” ဟု CANAL+ Myanmar FG ၏ Chief Executive Officer ဖြစ်သူ Mr. Erwan Luherne မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
myCANAL Myanmar မိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းကို ယခုဆိုလျင် Google Play Store https://goo.gl/oncZGP နှင့် Apple App Store https://goo.gl/3WRAqN မှ တစ်ဆင့် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနောက် MPTကွန်ရက်အသုံးပြု၍ လွယ်ကူသောအဆင့်အချို့ကို ဖြတ်သန်း ရုံမျှဖြင့် မိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တီဗီအစီအစဉ်များကို စတင်ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT အသုံးပြုသူများသည်အက်ပလီကေးရှင်းစတင်အသုံးပြုရန် ပထမဆုံးအဆင့်အဖြစ် http://mycanal.canal-plus.com.mm/mpt မှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် နံပါတ် 8434 သို့ “ON” ဟု SMS ပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် MPT အင်တာနက်အသုံးပြုကာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ပေါ်လာသော “MPT Subscribers” ဆိုသော ခလုတ်ကို ရွေးချယ်ရုံဖြင့် OTP (မိမိတို့ ဖုန်းနံပါတ်အား ယာယီ ကုတ်နံပါတ် တစ်ခု ပို့ဆောင်ပေးသွားမည့်) နည်းလမ်းဖြင့် Log In ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာဖြင့် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ မိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်း တွင် အချိန်ပြည့်မအားလပ်သည့် MPT အသုံးပြုသူများအတွက် လွယ်ကူစွာ နှင့် အချိန်ကုန် သက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်သော Feature များစွာပါဝင်ပါသည်။ myCanal Myanmar မိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကူအညီလိုအပ်ပါက သုံးစွဲသူများ အနေနှင့် MPT Call Center နံပါတ် ၁၀၆ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို သိရှိလိုပါက MPT Call Center နံပါတ် ၁၀၆ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း၊ MPT official Facebook Page ဖြစ်သည့် https://www.facebook.com/mptofficialpage/ သို့မဟုတ် MPT official website www.mpt.com.mm တို့သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 14, 2019 နိုဝင်ဘာ 14, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(၉၉) နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် MPT က (၉) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတစ်ဝန်း စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲကျင်းပမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT က (၉၉) နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နိုင်ငံတစ်ဝန်း စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားသွေးဌာနရန်ကုန်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ဆေးရုံများစသည့် နေရာ (၁၇) ခုတို့တွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
MPT ၏ ယခုအကြိမ်သွေးလှူဒါန်းပွဲမှာ (၉) ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး ယခင်က (၈) ကြိမ်မြောက်အထိ MPT ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ စေတနာရှင် သွေးအလှူရှင်ပေါင်း (၅,၅၀၀) ကျော်က အရေးပေါ် သွေးလိုအပ်နေသူများအတွက် သန့်ရှင်းသည့် သွေးပမာဏအဖြစ် (၂,၄၇၅,၀၀၀) မီလီလီတာခန့် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဌာနကြီးမှ ဒုတိယအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးမြင့်သိန်းထွန်းက
“ ကျွန်တော်တို့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သွေးလှူဒါန်းပွဲတွေတိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့သူအရေအတွက်က တစ်ခေါက်ထက်တစ်ခေါက် ပိုပြီးများလာတာကြောင့် ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူ လာရောက်သွေးလှူဒါန်းမယ့် စေတနာရှင်ပြည်သူတွေ ပိုများလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အရေးပေါ် အခြေအနေကြောင့် သွေးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ အမြဲသွေးသွင်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေကို ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ဒီသွေးလှူဒါန်းပွဲ အစီအစဉ်ကို ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း စေတနာသွေးလှူရှင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
“သွေးလှူဒါန်းမှုဆိုတာဟာ မိမိရဲ့သွေးကိုလှူဒါန်းပြီး အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ အလှူပါ။ အဲဒီ့လိုမွန်မြတ်တဲ့ အလှူကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း လူတိုင်းကို သဘာဝက ပေးထားတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လက်ဆောင်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အရင်သွေးလှူဒါန်းပွဲတွေမှာ
ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပြီး မြန်မာတစ်နိုင်လုံးက သွေးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီးပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီလို သွေးလှူဒါန်းမှုမှာ ပါဝင်ခြင်းဟာ (၉၉) နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ကို အကောင်းဆုံး ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ယူဆမိပါတယ်” ဟု ထပ်မံ ပြောကြားသည်။
MPT ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်းသွေးလှူဒါန်းပွဲသည် ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် MPT ၏ လူမှုအကျိုးပြု ဆောင်ရွက်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် သွေးလိုအပ်နေသည့် လူ့အသက်များကို ကယ်တင်နိုင်ရန်နှင့် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သွေးလှူဒါန်းခြင်းမှာ အရေးပါသည့် ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကို အများပြည်သူတို့ အကြားတွင် ပိုမိုသိရှိနိုင်စေရေးအတွက် ရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် MPT ၏ (၉) ကြိမ်မြောက် သွေးလှူဒါန်း ပွဲတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းလိုကြသူများ အနေဖြင့် ရန်ကုန်အတွက် ဖုန်းနံပါတ် <၀၉-၈၆၃၀၀၅၀> သို့ ဆက်သွယ် ၍လည်းကောင်း ၊ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ရုံးများသို့ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သွေးလှူဒါန်းမှု ဆောင်ရွက်မည့် နေရာများအား အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
အမှတ် (၉၇) ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဒေါနရပ်ကွက်၊ မုံရွာ
အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပြည်သာယာရပ်ကွက်၊ ပြည်
မင်းကြီးလမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်
ဆေးရုံလမ်း၊ ညောင်ရမ်းတောင်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်
ပြည်တော်သာအိမ်ယာ၊ ဆေးရုံရပ်ကွက်၊ မကွေး
ကလေးဆေးရုံ ကုတင် (၅၀၀)
(၆၆) လမ်း၊ ၂၇ x ၂၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေး
ကုတင် (၁၀၀၀) ဆေးရုံ
ဆွန်ပရာဘွမ်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊ ဒူခတောင် ရပ်ကွက်၊
စည်သူလမ်း၊ မင်းစုရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်
၁ ရပ်ကွက်၊ ဆေးရုံလမ်း၊ ဘားအံ
ဦးဇိနဘုရားလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်
လမ်းမကြီး၊ ကျေးပင်ကြီး ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ စဝ်စံထွန်းရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီး
လမ်းမတော်၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လားရှိုး
မိုင်းဇင်ရွာဒေသ၊ ဟဲခါးရွာ၊ ကျိုင်းတုံ
ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ မဲခေါင်ရပ်ကွက်၊ တာချီလိတ်
လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် အလေးပေးဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ တစ်ခု ဖြစ်သည်နှင့်အညီ MPT အနေဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စွန့်ဦးတီထွင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ် စသည့် မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ကို အဓိကထားပြီး အများပြည်သူတို့၊ ဒေသခံတို့နှင့်အတူ လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်များကို ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MPT ၏ လူမှုအကျိုးပြုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ အပြင် MPT ၏ အခြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှု ဆောင်ရွက်ချက်များအား ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် ၁၀၆ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ၊ www.mpt.com.mm သို့ဝင်ရောက်၍ဖြစ်စေ၊ MPT ၏ တရားဝင် Facebook page https://www.facebook.com/mptofficialpage သို့ ဝင်ရောက်၍ဖြစ်စေ လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 8, 2019 နိုဝင်ဘာ 14, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT က ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော်ကို တန်ခိုးကြီးဘုရား ၆ ဆူတွင် ကျင်းပသွားမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်) မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ အချိန်အခါသမယဖြစ်သော တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် MPT က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသ ကြီး (အရှေ့) ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့ရှိ တန်ခိုးကြီးစေတီပုထိုး ၆ ဆူ၌ ဆီမီး များ ထွန်းညှိဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်း နှင့် ယောဂီတဘက်များကို ဘုရားဖူးလာ ပြည်သူများသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းကို နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ MPT အနေဖြင့် အများပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည့် ဆီမီးထွန်းညှိဆက်ကပ်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်သည့် “MPT နှင့် အတူနွှဲပျော် တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်” အစီအစဉ်ကို မိဘပြည်သူများ အားလုံး အတူတကွ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
“MPT နှင့် အတူနွှဲပျော် တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်” အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကပင် စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ တန်ခိုးကြီး စေတီပုထိုးများ၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် နေရာ ၆ နေရာ၌ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆီမီးထွန်းညှိဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကို တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် နေ့၏ ညနေ ၆ နာရီတိတိတွင် စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မီးထွန်းပွဲတော်ပြုလုပ်မည့် နေရာများကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
စဉ် ပွဲတော်ကျင်းပမည့် စေတီများ တိုင်းဒေသကြီး
နှင့်ပြည်နယ် မြို့နယ်များ ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်မည့် အချိန်
၁။ ဗိုလ်တထောင်ဘုရား ရန်ကုန် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ညနေ (၆ ) နာရီ
၂။ အိမ်တော်ရာဘုရား မန္တလေး ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ် ညနေ (၆ ) နာရီ
၃။ ကောင်းမှုတော်ဘုရား စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်းမြို့ ညနေ (၆ ) နာရီ
၄။ ရွှေမောဓောဘုရား ပဲခူး (အရှေ့) ပဲခူး ညနေ (၆ ) နာရီ
၅။ ကျိုက်သလ္လံဘုရား မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ညနေ (၆ ) နာရီ
၆။ ဦးပါရဲ စေတီတော် ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့ ညနေ (၆ ) နာရီ
ထို့အပြင် MPT အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်မှ မှ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့အထိ စစ်ကိုင်းမြို့ ကောင်းမှုတော် ဘုရားဝင်း နှင့် နို၀င်ဘာလ ၁၀ ရက် မှ နို၀င်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့အထိ မော်လမြိုင်မြို့ ကျိုက်သလ္လံဘုရား၀င်း တို့တွင် ဒေသခံများအတွက် MPT ၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဌာနမှ ဒုတိယ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးမြင့်သိန်းထွန်း က “MPT အနေနဲ့ တန်ဆောင်တိုင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအချိန်တွေကို အများပြည်သူတွေနဲ့အတူဝေမျှဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ အားလပ်ရက် မှာ MPT က နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ အထင်ကရ စေတီပုထိုးတွေမှာ ဆီမီးများ ထွန်းညှိ ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်း နှင့် ယောဂီတဘက်များကို ဘုရားဖူးလာပြည်သူများသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို မင်္ဂလာရှိတဲ့ အခါသမယမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်သာ ကျင်းပတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဆီးမီးထွန်းညှိပူဇော်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့ကို စောင့်ထိန်းဖို့အတွက် တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော် အစီအစဉ်မှာ MPT နဲ့ အတူတကွ ပါဝင်ကုသိုလ် ယူနိုင်ကြစေရန် လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက နံပါတ် ၁၀၆ ကို ဖုန်းခေါ်၍ သို့မဟုတ် www.mpt.com.mmနှင့် MPT တရားဝင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ https:// www. facebook. com/mptofficialpage နှင့် “MPT နှင့် အတူနွှဲပျော် တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်” လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/events/601814923687947 သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 5, 2019 နိုဝင်ဘာ 5, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၁ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြု နေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များ ဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ပုဇွန်တောင်အိတ်ချိန်း နှင့် ဟံသာ၀တီအိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ (၃၀) ရက်တွင်အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖော်ဖော်ဝါရီလအကုန်အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပုဇွန်တောင်အိတ်ချိန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁ – ၂၉xxxx ၀၁ -၈၂၉xxxx
ဟံသာဝတီအိတ်ချိန်း ၀၁ – ၅၂၀xxx ၀၁ – ၇၅၂၀xxx
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 1, 2019 နိုဝင်ဘာ 1, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm, Uncategorized
မဟာမိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပူးပေါင်းထားသည့် ပထမဦးဆုံးသော ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျ ကို MPT က မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT သည် ထူးခြားဆန်းသစ်သည့် Mahar Data Pack ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ အထူး ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျမှာ
မဟာမိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပါဝင်သည့် မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအားလုံးကို စာရင်းသွင်းခ ထပ်ဆောင်း ပေးသွင်းရန် မလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၅၉၉ ကျပ်ဖြင့် 570 MB ပါဝင်သော Mahar Data Pack ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ခိုးဆိုးလုနှိုက်(၂)တောကျီးကန်း၊ ရွှေကြာ နှင့် Special9စသည့် နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို တစ်ပတ်စာ စာရင်းသွင်းခ ပေးသွင်းရန်မလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မဟာမိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကြည့်သလောက် ကျသင့်သည့်(Pay Par View) အစီအစဉ်ဖြင့် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး မြန်မာရုပ်ရှင် ချစ်သူများအနေဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဟာသ၊ ဒရမ်မာ၊ အချစ်အလွမ်း၊ အက်ရှင်နှင့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုစသည့် ရုပ်ရှင်များကို မဟာမိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းမှ တစ်ဆင့် ကြည့်ရှုခံစားနေနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုများကို အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည့်အပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအား ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ထားပြီး ၇ ရက်အတွင်း ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်း စုစည်းမှုအားလုံးကို အလွယ်တကူကြည့်ရူနိုင်တဲ့ မဟာမိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်း ကနေတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုကို ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အလွန်ပဲ အားရကျေနပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ MPT အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ပထဝီအနေအထားအမျိုးမျိုးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးကို တံတားအဖြစ် ပေါင်းကူးပေးထားတဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုပုံစံမျိုးစုံကို ယူဆောင်လာမယ်လို့ ကတိပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ဖြစ်တဲ့ (၇) ရက်စာ Mahar Data Pack နဲ့ ဆိုရင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့အတွက် Mahar Data 570 MB ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က ပြောကြားခဲ့သည်။
မဟာမိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းကို Google® Play Store ၊ MPT ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် လိုတရပေါ်တယ်တို့တွင် ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ *8004# သို့ ခေါ်ဆို၍ Mahar Data Pack ကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ရယူသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း အထူးအသုံးပြုခွင့် (Premium Access) အတွက် Mahar လင့်ခ် ပါဝင်သည့် စာတို (SMS) တစ်စောင်ကို လက်ခံ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 1, 2019 နိုဝင်ဘာ 1, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm